Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: 31 Jirsiga ONLF Waxay Kutimid Dhiiga Wadaniga JWXO Bye: Liban Miyir (Kulmiye)
Maqaal: 31 Jirsiga ONLF Waxay Kutimid Dhiiga Wadaniga JWXO Bye: Liban Miyir (Kulmiye)
Marka hore mahad dhamaanteed waxaa iskaleh Allaah (SWC) Naxariis iyo nabad galiyana nabigeena muxamed (SCW) Korkiisa ha ahaato.
Inta aanan guda galin maqaalka waxaan salaan qaali ah udiyaraa Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) kuwaasoo dhiigooda iyo dheecaankooda uhuray soo dhicinta iyo gobonimo helida dalkooda, dadkooda iyo diintooda,
Waxaan kaloon halkan salaan qaali ah oo ku dheehan farxad balaadhan uga dirayaa shacab waynaha Ogadeniya ee jooga gudaha wadankeeni hooyo kuwaasoo hiil iyo hooba lagarabtaagan halgankeena xaqa ah. Waxaan kaloon salaan baaxad wayn leh udirayaa Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee qurbaha ka hawl gala. Waxaan si gaara ah salaan qiimo badan ugu diyaraa dhamaan madaxda halganka JWXO, salaantaas kadib hadaan guda galo qormada maqaalkayga.
Halgamayaal 15/8/1984 oo ah maalintii la aas’aasay jabhada JWXO waa maalin kuwayn dhamaan umada Somalida Ogadeniya inteeda caafimaadka qabta ee jecel xornimada dalka Ogadeniya, qofwalba wuxuu dhashaa isagoo xor ah oo madax banaan, qofna looma abuurin in asaagii la adoonsado. Hadana taariikhda aadamiga sida kucad waxaa mar walba jiray is cadaadis, isku dul noolaansho, gumaysi iyo xornimo raadis kasoo horjeeda. Gumaysigu sidiisaba waa qabsasho xoog shisheeye dhul iyo dad uusan lahayn, kana hor istaaga xaqa ay u leeyihiin horumarka dhaqanka, dhaqaale, bulsheed iyo xoriyada aasaasiga ah ee aadaminimo, inkastoo gumaysigu leeyahay magacyo iyo noocyo kala duwan, hadana midka maanta haysta Ogaadeeniya waa gumaysi kii ugu aqliga xumaa uguna dulisaanaa.
Waxaa kaloo taariikhdu ina baraysaa in markasta xaalada gumaysigu abuurto in dadka la gumaystaa layimaadaan iska caabin iyo falal lid ku ah gumaysiga falalkaasoo ah dhaqdhaqaaqa bulshada masiibadu ku habsatay ay kaga soo horjeedo gumaysiga si ay iskaga tuurto, una helaan xuquuqdooda aayo ka tashi, una gaadhaan horumar dhanwalba
ah. Dhaqdhaqaaqa xornimo doonka ah iyo iska caabinta gumaysigu wuxuu yeeshaa hogaamin midaysan oo ka soo dhexbaxda kana turjumaysa rabistaanka shacabka xornimo doonka ah.
Lasoco Qaybta kale haduu ilaahay yiraahdo.